IiHacks zeNtlawulo eziSelfowuni zeshishini | Martech Zone
Intlawulo yokuHlawula iiSelfowuni kwiiShishini
NgoLwesibini, Meyi 13, 2014 NgoMvulo, Meyi 12, 2014 Douglas Karr
Ngaba ishishini lakho libonelela ngenketho yokuhlawula? Njengoko iinkonzo zokuhlawula kunye nobuchwephesha beselfowuni buye kuyo yonke indawo, ithuba lokujika ithemba libe ngumthengi ngenketho yokuhlawula eshukumayo kufuneka ibekho kwi-radar yakho!
Ukuhlawulwa kwefowuni ngokucacileyo kuyitekhnoloji ehamba phambili yamashishini abo bonke ubungakanani. Ngo-2012 bekukho i-12.8 yezigidigidi kwintengiselwano ephathekayo e-US, ngo-2017 elo nani liza kuba kuma-90 ezigidi zeedola. Leyo ngama-48% kwinqanaba lokukhula ngonyaka ngaphezulu kweminyaka emihlanu! Nangona kunjalo kuphela ngama-66% amashishini amancinci asebenzisa naluphi na uhlobo lwetekhnoloji yeselfowuni, kungasathethwa ke ngobuchwephesha bokuhlawula. Ukuhanjiswa
Ndizifumana ndibhatala ityala lam lefowuni ephathekayo, i-inshurensi, ukukhwela ndide ndibhatale nokupaka kwam ezitalatweni ngezicelo zeselfowuni kunye neenketho zokuhlawula. NgoMgqibelo bendiye kwindibano yezemali apho ifandesi ethe cwaka yenzeke ngokusetyenziswa kwemiyalezo ebhaliweyo kwaye ayikho enye into!
Kukho umzekelo kuyo yonke intengiselwano-phakathi kwesigqibo sokuthenga kunye nokuthengwa okwenyani-apho amathemba amaninzi eshiya. Ukuhlawulwa kweselfowuni kunokuba yibhulorho yokuzihlangula kwezi lahleko.
tags: Dwollaumgangatho ophezuluukwamkelwa kwentlawulo ephathekayoukhuseleko lwentlawulo ephathekayoiintlawulo mobileUkuhlanganiswakufutshane nonxibelelwano lwentsimiNFCsula iifowuniIikhowudi zeQRsikwereuber
Abathengi abazizityebi bafuna uKhathalelo lwaBathengi lwaBantu
Uhlalutyo lukaGoogle: AmaQela okuQulunqa uHlaziyo lokuSebenza koMxholo